BS52 uthotho oluphathekayo-ubungqina bokukhangela isibane sokukhangela
1. Isetyenziswa kakhulu kuphononongo lwe-oyile, ukusulungekiswa kwe-oyile, iikhemikhali, umkhosi kunye nezinye iindawo ezinobungozi kunye namaqonga e-oyile angaphesheya kolwandle, iinqwelo ze-oyile kunye nezinye iindawo zokuhlola kunye neenjongo zokukhanya ezihambayo;
5. Ifanelekile kwiindawo ezifuna ukukhuselwa okuphezulu, ukufuma kunye neegesi ezidliwayo.
1Yenziwe nge-aluminium alloy kunye nobunzima obuphezulu.umphezulu ovuthuza isanti, unenkangeleko entle.
2 .Isibane esikhethekileyo, ubomi obude, ukusetyenziswa okuphantsi, ukonga amandla kunye nokusebenza okuphezulu, ukukhanya kokuqokelela kuthambile (kungasetyenziselwa iingozi zendlela kunye nophando lolwaphulo-mthetho kwindawo yokufota , amanqaku, iminwe yeminwe, iifoto njl.), ukukhanya okukhanyayo, i-1200 ilumen, uluhlu lwendiza 600m, ukuqhubeka ukusebenza ixesha 8hours, ukuba ukusebenza luminous flux 600 lumen, qhubeka ixesha lokusebenza phezu 12 iiyure.
3. Yamkela i-pulse adjust technical inokukhethwa;
4 .Yamkela amandla aphezulu eebhetri ezingezizo inkumbulo yokhuseleko lokusingqongileyo, umthamo omkhulu, akukho ngcoliseko, ukusebenza kwentlawulo nokukhupha kugqwesileyo, izinga lokuzikhupha liphantsi;
5 .Ngokhuseleko lwe-voltage ephantsi kunye nezixhobo ezichasene nempazamo, ukutshintshwa kunokutshixwa ukuba akukho kusetyenziswa, emva kokusetyenziswa okuqhelekileyo, kutshixiwe ngokuzenzekelayo;
6 .Kulula ukuthwala, inokubamba ngesandla, igxalaba njalo njalo, inobungqina obuhle bokungangeni manzi, umsebenzi wokuthintela uthuli.
1. Ngokungqinelana nemigaqo yemigaqo echaphazela imodeli yokukhetha rhoqo, kwaye amanqaku e-Ex-amanqaku kufuneka afakwe emva komzekelo.Ithemplethi ilandelayo: ikhowudi yemodeli yemveliso implication+Ex-mark.Umzekelo, sifuna isibane esingatshiyo.Ngokwazo, imodeli ekuthethwa ngayo yiBS52+ExdⅡCT6 Gb+20.
Ngaphambili: BGD series Explosion-proof high pole isibane
Okulandelayo: dYD series Explosion-proof(LED) fluorescent isibane
AD62 series Isibane Explosion-proof
Iimpawu zoMfuziselo weModeli 1. I-enclosure ibunjwe ngamandla aphezulu e-aluminium alloy ngexesha elinye, elinamandla amakhulu, imisebenzi emihle yokuqhuma.Umphandle wayo utshize ngeplastiki ngoxinzelelo oluphezulu lwe-static emva kokudubula kuqhume ngesantya esiphezulu.Inoncamelelo olomeleleyo lweplastiki yomgubo kunye nokusebenza okukhulu kokuchasana nokudleka.Izibophelelo zangaphandle zenziwe ngentsimbi engenasici.2. Izindlu zesibane zenziwe ngeglasi ephezulu ye-borosilicate enokuhanjiswa okukhulu kunye nokumelana nokothuka kwamandla aphezulu.It&#...
Iimpawu zeMizekeliso yeMizekeliso 1. Iqokobhe le-aluminiyam yealloyi, i-die-casting, i-surface sprayed, inkangeleko entle okanye idityaniswe ngentsimbi engatyiwayo, umphezulu opolishiwe;2. Umbhobho wensimbi okanye i-cable wiring;3. Umxhasi unokuxhotyiswa njengoko kufuneka.I-Main Technical Parameters Umyalelo weNowuthsi 1. Ngokungqinelana nemigaqo yemodeli echaphazelayo ukukhetha rhoqo, kunye namanqaku e-Ex-mark kufuneka afakwe emva kwentsingiselo yemodeli.Ithemplethi yile ilandelayo: ikhowudi yemveliso yomzekelo wemveliso +Ex-mark.Umzekelo, w...
Iimpawu zeMpembelelo yoMfuziselo 1. Iqokobhe le-aluminiyam ye-alloy die-casting, umphezulu utshizwe nge-electrostatically, kwaye inkangeleko intle.2. Ulwakhiwo olunamalungelo awodwa omenzi we-multi-cavity, i-cavity yamandla, umthombo wokukhanya kunye ne-wiring cavity Imizimba izimele.3. Yamkela isigqubuthelo esicacileyo seglasi epholileyo yeborosilicate ephezulu, isigqubuthelo esicacileyo se-atomization anti-glare uyilo, inokumelana nempembelelo yamandla aphezulu, ukudityaniswa kobushushu, kunye nokuhanjiswa kokukhanya ukuya kuthi ga kwi-90%.4. Intsimbi engatyiwayo evezileyo iziqhoboshi ezinomgangatho ophezulu ...
FC-ZFZD-E6W-CBB-J UkuKhanya koMlilo oNgxamisekileyo / CBB...
IiMpawu zeMpembelelo yoMfuziselo 1. Uhlobo olunobungqina bokudubula "Ukhuseleko olungenakudubula kwikhompleksi ezaliswe yintlabathi" okanye "ubungqina bokudubula kothuli", kwinqanaba elihambelanayo lerhasi yokuthintela ukuqhuma kunye nemekobume yothuli ikhona ngaxeshanye.2. Iqokobhe leAluminiyam yokuphosa ukufa, umphezulu we-electrostatic spray, imbonakalo entle.3. Ukusebenzisa ibhodi yokukhanya kwe-LED ekhanyayo, kunye nokusetyenziswa kwamandla aphantsi, ubomi obude, izibonelelo ezingenalo ukugcinwa.4. Ipakethi yebhetri eyakhelwe-ngaphakathi ye-Ni-MH, i-n...